Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Rasaasta La Riday: Dhismaha Pentagon -ka ee Xiritaanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
PFPA waxay sheegtay in dhismaha Pentagon -ka ee Arlington, Virginia - oo ah xarunta Waaxda Difaaca Mareykanka - uu ku jiray xaalad xirid sababtuna tahay “dhacdo” ka dhacday saldhigga metrooga ee xarunta.
Pentagon -ku wuxuu ku jiraa xaalad xirid sababtuna tahay “dhacdo”.
Sida ay wararku sheegayaan dhowr qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii rasaas la riday.
Adeegga Caafimaadka Dab -demiska iyo Gurmadka ee Arlington ayaa xaqiijiyay inay ka jawaabayaan "dhacdada rabshadaha firfircoon."
Wakaaladda Ilaalinta Xoogga ee Pentagon -ka (PFPA) ayaa ku dhawaaqday in dhismaha Pentagon -ka uu galay xiritaan, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya rasaas la riday iyo dhowr qof oo dhaawacmay, iyagoo ku boorriyay dadweynaha inay ka fogaadaan aagga.
Subaxnimadii Talaadada ee tweet -ka, PFPA waxay sheegtay in dhismaha Pentagon -ka ee Arlington, Virginia - oo ah xarunta Waaxda Difaaca Mareykanka - uu ku jiray xaalad xiritaan ah sababtuna tahay “dhacdo” ka dhacday saldhigga metrooga ee xarunta, iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah .
Wakaaladda Ilaalinta Ciidanka ee Pentagon -ka ayaa sidoo kale dirtay digniin ku amraya dhammaan shaqaalaha inay ku sii jiraan dhismaha.
Sida ay sheegayaan qaar ka mid ah wararka maxalliga ah oo aan la xaqiijin, dhowr qof oo uu ku jiro sarkaal boolis ah ayaa dhaawacmay kadib markii rasaas la furay. Sarkaal magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu hoos u dhacay, inkastoo aan la ogeyn xaaladooda.
Adeegga Caafimaadka Dab -demiska iyo Gurmadka ee Arlington wuxuu ku xaqiijiyay Twitter -ka inay ka jawaabayaan "dhacdada rabshadaha firfircoon." Qoraal dambe oo ay soo dhigeen barta twitter -ka, waxay ku xaqiijiyeen inay la kulmeen bukaanno badan iyo in “muuqaalku uu weli firfircoon yahay.”
Muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa u muuqday inay muujinayaan in CPR loo maamulayo ugu yaraan laba qof. Ma cadda haddii qof la tuhmay la qabtay, ama inta qof ee rasaasta furay.
War ka soo baxay Pentagon -ka laftiisa ayaa lagu sheegay in xannibaadda ay sabab u tahay “waxqabadka booliiska.” Tareennada dhulka hoostiisa mara ayaa lagu amray in ay maraan saldhigga si hawlgalka bilaysku u sii socdo iyada oo aan caqabad lahayn.
Hawaii waa gobolka ugu walaaca badan Mareykanka ee lagu noolaado